Dibad-bax lagu diidan yahay dhuumaha gaaska Mtwara oo rabshad isku badalay iyo millatari halkaa la geeyay - Sabahionline.com
Xukuumadda Tansaaniya ayaa u diraysa Ciidanka Difaaca Dadka magaalada Mtwara kadib markii uu mudaaharaad aad u wayn oo ay sameeyeen dadka ka soo horjeeda dhismaha dhuumo gaas ah oo isku xidhaya Mtwara ilaa Dar es Salaam isu baddalay shaqaaqo.
Booliiska ayaa la geeyay si ay u gaaf wareegaan waddooyinka Dar es Salaam maalintii Khamiista (23-kii Maajo) kadib markii ay shaqaaqooyin ku lug leh dhismaha dhuumaha gaaska ka dillaaceen Mtwara. [Deodatus Balile/Sabahi]
Wasiirka Arimaha Gudaha Emmanuel Nchimbi ayaa go'aankaas ka hor sheegay baarlamaanka maalintii Khamiista (23-kii Maajo). Wuxuu sheegay in xukuumaddu ay go'aansatay in ay sugto "sharciga iyo kala danbaynta" Mtwara, aynana ahayn in xukuumadda lagu dhalleeceeyo talaabooyinka ay ka qaadayso kuwa xad-gudbaya.
Dadka dagan Mtwara qaarkood ayaa waraaqo qaybinayay ay dadka ka codsanayaan in ay si rabshado leh uga hortagaan miisaaniyada Wasaarada Tamarta iyo Macdanta, taas oo la hordhigay baarlamanaka Arbacadii, haddii uunan wasiirka masuulka ka ah uusan balan-qaadin joojinta dhismaha tuubooyinka gaaska, taas oo ah arrin shacabka qaarkii ay mudo badan dalbanayeen, ayuu Nchimbi u sheegay sharci-dajiyayaasha.
Taa caksigeeda, ayaa Wasiirka Tamarta iyo Macdanta Sospeter Muhongo uu ku cadeeyay hadal toos telefishinka looga soo daayay in dhismaha dhuumaha gaasku uu u soconayo sidii loogu tala galay, taas oo bilawday shaqaaqooyinka gobolka ka taagan.
Shacabka Mtwara ayaa burburiyay Buundada Mikindani oo isku xidha Mtwara iyo aaga Lindi, dab qabad siiyay toban guri oo uu ku jiro guri uu lahaa wariyaha Kassim Mikongolo oo u shaqeeya Hay'ada Warbaahinta Tansaaniya, waxay kale oo gubeen xafiisyo xukuumadeed iyo xafiisyo uu leeyahay xisbiga talada haya, sida uu sheegay Nchimbi.
Wasiirka arimaha dibada ayaa u xaqiijiyay barlamanaka in ciidanka booliiska ee rabshadaha ka hor taga ay isticmaaleen gaaska dadka kaga ilmaysiiya si ay u kala kaxeeyaan dadkii mudaaharaadayay.
"Markii uu xaalku halkaas gaadhay, ayuu Gudoomiye Gobaleedka Mtwara uu xukuumadda waydiistay in ciidamada la adeegsado, kaasna wuxuu ahaa khiyaarka kaliya een haysanay," ayuu yidhi Nchimbi.
Si kastaba ha ahaatee, markii ciidamada la geeynayay halkaa Arbacadii, ayaa waxa shil galay mid ka mida gawaaridii ciidanka, halkaas oo ay afar askari ku dhinteen.
"Waxaan rabaa in aan Tansaaniyaanka u caddeeyoin afarta ciidan ee shilka galay shalay ee dhintay iyaga oo Mtwara u socda aysan bilaasha ku dhimanin," ayuu Nchimbi ku yidhi barlamaanka. "Waxaan tallaabo adag ka qaadaynaa qof walba oo maleegaya rabshadaha waxanunna hor keeni doonnaa caddaaladda."
Dhismaha dhuumaha gaaska oo sii socon doona: Kikwete
Tallaabo aan horay loo arag, ayuu Madaxwayne Jakaya Kikwete waxa uu 10-kii habeeynimo ee arbacadii soo saaray hadal adag, isaga oo sheegay in codsiga lagu doonayo joojinta dhismaha dhuumaha gaaska aan la aqbali karin. Wuxuu ballan-qaaday in xukuumaddu ay tallaabo adag ka qaadayso qof alla iyo qofkii dhibaatooyinka ka maleegaya Mtwara.
"Waxaan aaminsanahay in ay tahay wax aan la aqbali karin in kahyraadka waddanku lagu koobo oo kaliya meelihii laga helay," ayuu yidhi Kikwete. "Waddan aduunka ah oo ay arintaas ka dhacdayna ma jirto, qorshana meelna kama jiro, kamana bilaaban karo Mtwara."
Kikwete ayaa ku amary ciidanka ammaanka in ay raadiyaan qof walba oo arrintan lug ku lahaa caddaaladana ay hor keenaan.
Hakinta dhismaha tuubooyinka gaaska ma dhacayso inta xukuumaddiisu ay talada hayso, ayuu sheegay Kikwete.Xukuumadda ayaa balla-qadday in ay ka dhisayso Mtwara 57 warshadood shaqaduna ay bilaabatay, ayuu yidhi, sidaas darteed, kuwa shacabka Mtwara ku kicinaya in markii gaaska la geeyo Dar es Salaam la iska iloobi doono, waxa ay leeyihiin dano khaas ah.
Afhayeenka Baaralaanka Anne Makinda ayaa shaqadii baarlamaanka hakad galisay galabtii Arbacada si xukuumadda wakhti loogu siiyo in ay ammaanka Mtwara soo celiso.
"Shalay waxaan hakad galiyay shaqadii baarlamanaka... Laakiin iyada oo la tix-galinayo xaaladda Mtwara, ayaan haddana mar kale shaqada baarlamaanka ka fasaxayaa ilaa [Jimcaha]," ayay Makinda u sheegtay xildhibaannada iyada oo joogta Dodoma. "Sababta [go'aankan] ka danbaysa ayaa ah in aan helno fursad aan ku kaalmaynayno walaalahaanaga Mtwara in ay is dajiyaan."
Shacabka Mtwara oo kacsan, ganasiguna uu xidhan yahay
Hassan Chikongowe, oo 46 jir ah degganna Mtwara ayaa khadka telefoonka ugu sheegay Sabahi sida ay shaqaaqadu Arbacadii ku bilaabatay.
"Dadka oo dhan waxaa la waydiistay in ay arintan u diyaar garoobaan," ayuu yidhi. "Waxaan si dhow ula soconnay gudbinta wasiirka ee miisaniyada. Waxaan xiisaynaynay in aan ka maqalno in qorshaha dhistaanka dhuumuhu la joojin doono, laakiinse waxaa la yaab nagu noqotay, in uu sheegay in qorshuhu sidii loogu tala galay uu ku socon doono. Markaas ayay ahayd markii ay dadku waddooyinka u dhaqaaqeen."
Chikongowe ayaa sheegay in xaaladda Mtwara ay kacsan tahay booliiskuna uu guri guri u baadhayo, dhammaan ganacsiga magaaladuna uu xidhan yahay.
Neville Meena, oo ah xoghayaha guud ee Golaha Tifatirayaasha Tanzaaniya, ayaa sheegay in wariyayaasha jooga Mtwara ay ku khasbanaadeen in ay is qariyaan sababta oo ah muddaaharadayaasha ayaa bilaabay olole ay ku laynayaan.
"Rajo la'aan darteed, ayay [kuwa mudaaharaadaya] ay u malaynayaan in wariyayaashu aysan si fiican u gudbinaynin waxa ay doonayaan, makra hadda waxa ay u moodaan in xalku yahay in la dilo," ayuu Meena u sheegay Sabahi. "Waxay gubeen guriga Mikongolo waxayna baadi-goobayaan kuwo kale. Waxaan la xidhiidhnay booliiska in ay badbaadiyaan dadaalkuna wuu socdaa."
Xukuumadda oo sheegtay in shacabka waa la marin-habaabiyay
Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaarada Tamarta iyo Macdanta Joachim Maswi ayaa u sheegay Sabahi in shacabka Mtwara la marin-habaabiyay dantuna ay ugu jirto dhistaanka tuubooyinka gaaska taas oo kobcinaysa dhaqaalaha waddanka Tansaaniyaanka oo dhanna ay ka faa'iidaysanayaan.
Wuxuu sheegay in gaaska aan la gaynaynin oo kaliya Dar es Salaam si ay koronto u siisio caasimaga ganasiga sida la sheegayo, laakiinse ay leedahay istcimaal wajiyo badan leh sida warshadaha iyo isticmaalka guryaha.
Tani ma aha markii ugu horaysay ee ay rabshaduhu ka qarxaan Mtwara. Bishii Janaayo ayaa dad ka mudaaharaadayay tuubooyinka gaaska afar qof ku dhinteen 12-na dhaawacday, iyada oo qiyaastii sababtay 1.5 bilyan oo shilin ($922,000) burubur ah.
Kadib markii mudaaharaadyo isaba joog ah ay horraantii sannadkan dhaceen, ayuu Raiisul Wasaare Mizengo Pinda uu sheegay in xukuumaddu ay ku fashiilantay in ay shacabka u sheegto sidii dhuumaha loo maamuli lahaa.
Bishii Febraayo, ayuu Gudoomiye Gobaleedka Mtwara Kornayl Joseph Simbakalia uu shaaciyay qorshayaal lagu hormarinayo xidhiidhka u dhaxeeya shacabka Mtwara iyo xukuumadda Tansaaniya oo la xidhiidha arrimaha khayraadka gaaska.
wakhtigaas ayaa, Kikwete sheegay in 16% gaaska laga soo saaro Mtwara la gaynayo Dar es Salaam, inta soo hadhayna ay ku nagaanayso Mtwara iyada oo siyaabo kala gadisan loo istcimaalyo, oo ay ku jirto in bada laga dhoofiyo.
Waan fahansanahay in ay Tanzania gaas leedahay, laakiin waa inaan qorshe wanaagsan u helnaa khayraadkeena dabiiciga ah. Waxan ammaan u soo jeedinayaa dadka dagan Mtwara waxaanan ku amaanayaa waxay sameeyeen, waana wax ay xaq u leeyihiin oo waajibkoodii ah. Dawladuna waa inay yeelataa xigmad markay arrinkan go’aaminayso, hadii kale waxa dhici karta inaan la kulano masiirkii Koonfurta iyo Waqooyiga Suudaan, waayo dadku imika aad ayay wax u garanayaan.
Aan sabir yeelano. Gaasta waxaa iska leh reer Tanzania.
Waa inaan taxadir yeelanaa marka aan qaadanayno go’aamada. Anigu waxaan qabaa waxaa inala gudban inaynu ka fekerno waxa ku dhacaya maalgashadayaasha iyo khayraadka kale. Dadka deegaanko miyay wax faa’ido ah hayaan? Tusaale ahaan, haddayno eegno shabakada korantada qaranka ee laga hirgaliyay magaalada Kidatu, waa sidee xaalada dadka deegaanka u dhashay? Ma macmiil baa? Goobaha kale iyagu waa sidee? Waxaa laga yaabaa in dadka reer Mtwara ay isku dayayaan inay ka badbaadaan wixii ku dhacay walaalohood, kuwaasoo arkay in xadhkaha korantada la gaynayo magaalada Daara salaam, halka iyagna deegaankoodu uusan haysanin wax koranto ah!! Taasi waa mida koowaad. Teeda kale, waa in hab diblumiyaasiyadeed la adeegsadaa, waayo dhamaanteen walaalo ayaynu nahay. Maxaa inagu kalifaya inaynu gaadhno heer aynu dhexdeena is dilno? Run ahaantii, arrinta tamarta iyo macdanta waxaa ka jirtay dhibaato. Dadka ajaanibka ah waxaa ku waajib ah inay noqdaan kuwo dadka u naxariista, waana inay kibirka iska daayaan! Xukuumadeenu way jeceshahay muwaadiniinteeda, markaa maaha inay inagu marin habaabiyaan heshiisyadooda cajiibka ah! Ilaahay ha barakeeyo Tanzania oo madaxwayneheenana ha ku manaysto xigmad iyo awood, si uu arrinkan si nabadgalyo leh uu ugusoo afjaro.
Walaalahayaga reer Mtwara waxaan leeyahay ha ogolaanina in gaasta la qaado iyadoo aan deegaanku diyaar ahayn.
Madaxwaynuhu wuxuu soo saaray warbixin adag. Dadka wata danohooda gaarka ah u suurto gali mayso inay fidiyaan dacaayado, si ay u kharibaan nabadgalyada, iyagoo ka faa’idaysanaya garashada kooban ee dadka reer Mtwara. Dunida meel kasta gaasta waxaa laga soo qaadaa meesha laga qoday waxaana la geeyaa meelo kale.
Xukuumada waxaa laga filayay inay la timaado xigmad oo ay dadka reer Mtwara wacyigaliso, waayo hadalka wasiirku waa mid kasoo horjeeda wadahadalada dhexmaraya raysal wasaaraha iyo dadka reer Mtwara kadib rabshadihii dhacay horaantii sanadkan, waxaanuu raysal wasaaruhu u xaqiijiyay in warshada gaasta laga dhisi doono gobolka Mtwara. Teeda kale, anigu waxaan aad uga murugooday in xukuumada uu khasaare kasoo gaadho fashilanka ay ku fashilantay inay wacyi galiso dadka reer Mtwara, ilaa gaadhay heer ay afar askari u dhinteen caajisnimada xukuumada awgeed. Arrinkaasi aniga shakhsi ahaan ayuu ii taabtay.
Anigu waxaan aaminsanahay in ay tahay in xukuumadu ay wacyigalin buuxda u fidiso muwaadiniinta oo aysan isticmaalin awood.
In bilaa sabab la isu dilaa meel ina gaadhsiin mayso. Si uu dalkeenu u barwaaqoobo, waxaa loo baahanyahya in xigmad lagu xaliyo dhibaatooyinkeena. In qofku hadafkiisa ku gaadho caadifad iyo cadho iyo gacan ka hadal maaha wax dhaqankeena waafaqsan. Dadka reer Mtawara iyo dadka talada haya waxaan leeyahay ogaada inay Tanzania tahay mid oo aynu dhamaanteen leenahay xuquuq siman.
marka ay warbaahinteenu macluumaadka soo bandhagiyayaan waa inay wixii macluumaad ah ee laga daliil qaadanayo loosoo bandhigaa sawir ahaan, sawiradaas oo ku saabsan goobta laga waramayo, mana aha inay noqdaan sida waxa aad kor kusoo bandhigteen. Hadii ay akhristayaashu taa helaan, waxay si wayn u xiisayn doonaan maqaaladiina. Waa mahadsan tihiin.
Ta koowaad waxaan dadka reer Mtwara ku hambalyaynayaa daafacaada ay daafaceen khayraadka qaranka. Anigu waan ogahay inay suurtagal tahay inaysan dad badani I fahmin, laakiin waxaan leeyahay marka la eego tamarta iyo khayraadka xaga macdanta ah ee Tanzania yaala, dalkani maaha inuu noqdo mid saboolnimo ba’ani ay haysato, hasayeeshee dadka reer Tanzania waxay ilaa imika ku jiraan saboolnimo isdaba jog ah, arrinkaasina waa mid aad u khatar badan. Markaa waa in xukuumadu aysan moodin in arrinku halkaa ku dhamaan doono oo uu ku koobnaan doono magaalada Mtwara oo kaliya, waayo waxaa dhici karta inuu Tanzania gabi ahaanteedaba ku faafo.
Dhanka kale, xukuumadu maaha inay xal moodo awood in wax lagu maamulo, mana aha inay u malayso dadk tirayar ra’yigoodu uu ka dhigan yahay ra’yiga bulshada dhamaanteed. Waa in marka hore la dhagaystaa bulshada arrinku khuseeyo, kadibna waa in xukuumadu ay sharaxaad ka bixisaa oo ay dadkaa u sheegtaa ujeedooyinkeeda iyo qorshayaasheed. Xukuumadu waxay leedahay shabakad wacan oo ay ku ogaan karto waxay muwaadiniintu leeyihiin, iyadoo adeegsanaysa dawladaha hoose iyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo hogaamiyayaasha, waxaanay ogaan kartaa waxay dadku hadal hayaan iyo waxay rabaan, mana aha inay iska indha tirto balse waa inay qabataa wixii suurtagal ah, waana inay si aan madmadow ku jirin oo dagan ay u hadashaa hadii waxyaabaha qaarkood aysan suurtagal ahayn.
Khaladka kale ee ay xukuumadu samaysay ee ay maalin maalmaha ka mid ka toobad keeni doontaa waxa weeyaan bilawga ay dhawaan bilawday inay si xad dhaaf ah awood milatari u adeegsato. Xukuumadu waa inay fahantaa in marka ay ciidamo dariiqyada soo dhoobto ay kusoo bixi karaan waxyaabo aan hore loo arag loona maqal. Waxyaabo badan ayay ciidamadu ka maqlaan kana arkaan dadka, markaa maaha inay xukuumadu ay yaabto hadii ay ciidamadu maalin maalmaha ka mid ah ay ciidamadaasi diidaan inay fadhiisimohooda ku laabtaan, oo ay gacanta ku dhigaan deegaaamadaas hodanka ah. Teeda kale in ciidamadaas laga soo saaro deegaamadaas kharash badan ayaa ku bixi doona.
Waxa laga yaabaa in waxaan ku hadlayaa uu iska maalayacni yahay, dadka reer Tanzania iyaguna maaha kuwo filaya in ay dhacaan wixii Mtwara ka dhacay iyo sababtay u dheceen.
Xukuumadu waa inay xakamaysaa dambiilayaasha si loo ilaaliyo midnimada qaranka, mana aha inay ogolaato in sidaa loo kala qaybsamo.